Afrika, 03 October 2019
Maamulka Baydhaba oo is-beddel lagu sameeyey
Sideed dhallaan oo ku geeriyooday dab ka kacay Isbital
Sideed dhallaan ayaa ku geeriyooday dab aroornimadii talaadada burburiyey isbital dhalmo oo ku yaalla bariga dalka Algeria, sida ay sheegeen kooxaha gurmadka deg degga ah.
Arday ku dhimatay iskuul kusoo dumay Nairobi
Toddoba caruur ah ayaa geeriyooday, ugu yaraan 57 kalena waa ay dhaawacmeen kadib markii maanta uu soo dumay iskuul ku yaalla magaalada Nairobi ee dalka Kenya, sida ay sheegeen saraakiisha dowladda.
Itoobiya oo Dhabar-jabisay Argagixiso
Dowlada Itoobiya ayaa sheegtay in ay xirtay dhowr qof oo ay sheegtay in ay ka tirsanyihiin ururada Al Shabab iyo Daacish, kuwaas oo lala xiriirinayo in ay wadeen qorshayaal ay ku weerari rabeen meelo ka duwan oo ku yaalla Itoobiya.
Bannaanbaxyo kale oo ka dhacay Masar
Bannaanbaxyo kale oo lagaga soo horjeedo madaxweyne Abdelfatah Al Sisi ayaa Sabtidi ka dhacay dalka Masar.
Dibadbaxyo ka Bilowday Dalka Masar
Kumaan dibadbaxayaal ah ayaa isugu soo baxay waddooyinka dhowr magaalo oo ku yaala dalka Masar, wax lagu tilmaamay kacdoon looga soo horjeedo madaxweynaha xukumadda Milatariga, Cabdulfitaax Al-Sisi
Arday Dhadhaab looga qaaday Jaamcadda Cambridge
Cabdi Aadan Khaliif, oo horey uga tirsanaa qaxootiga xeryaha Dhadhaab ayaa ka caawinaya ardayda qaxootiga ee haysta shahaadada dugsiga sare helista waxbarasho sare, oo ah Jaamacadda Cambridge ee dalka UK.